IXieyanshi Abrasives ibambisene neComic!
Siyakuhalalisela ngalokhu kubambisana. Ngemuva kokuxoxisana isikhathi eside nokuhlolwa, iShanghai Xieyanshi Abrasives ekugcineni idlulise i-COMAC'S (Commercial Aircraft Corporation of China Ltd) ihlolisisa futhi yaqinisekisa, yaba yinsizakalo ethembekile ...
Ukubaluleka Kwezinyathelo Zokusikwa Kwokhuni
Izindlela zokugaya zibandakanya ukugaya okomile, ukugaya amanzi, ukugaya uwoyela, ukugaya i-wax nokugcoba umuthi wokuxubha. Ukugaya okomile kungahlukaniswa kube ukugaya okunokhahlo, ukugaya okuyisicaba nokugaya okuhle. Ukugaya okunzima kusetshenziselwa ukususa uboya bezinkuni, izibazi, amamaki weglue kanye ne-p ...
Izinyathelo Zokufaka Ithuluzi Elilungele Ithuluzi Le-Xys Dust Free Mobile Dry Grinder
Isinyathelo 1 Imininingwane yezingxenye ezingasebenzi: (Umehluko omncane wezinketho zezingxenye ezahlukahlukene) Isinyathelo 2 ...
Yiziphi izigaba eziyinhloko ze-abrasives?
Ama-Abrasive Abrasives yigama elijwayelekile lama-abrasives nama-abrasives, kufaka phakathi imikhiqizo e-abrasive nemikhiqizo ye-Bai Abrasives. Ama-Abrasive abrasive aziwa njengamazinyo ezimboni. Ekugayeni, amathuluzi wokuhlambalaza noma wokulimaza asetshenziswa kakhulu njengamathuluzi okugaya ukwenza izingxenye zomshini ukuhlangabezana nezidingo ezithile zobuchwepheshe ...